I-Omnisend: Ipulatifomu Elula Ukusebenziseka ye-imeyili ye-Ecommerce ne-SMS Marketing Automation | Martech Zone
I-Omnisend: Ipulatifomu Elula Ukusebenziseka ye-imeyili ye-Ecommerce ne-SMS Marketing Automation
Lwesibili, Disemba 29, 2020 NgoLwesibili, Januwari 12, 2021 Douglas Karr
Enye yentuthuko ejabulisa kakhulu ekuthengiseni okuzenzakalelayo kulo nyaka, ngombono wami, kube ukuthuthuka kwezixazululo ezingabizi ukwenza ukuthengisa kwakho kwe-ecommerce kube lula. Amapulatifomu wesiko lokumaketha wendabuko kufanele ahlanganiswe bese kuthi umkhankaso ngamunye uthuthukiswe ngokuhamba kwesikhathi - ukuqaliswa kungathatha amasonto noma izinyanga ngaphambi kokuqala ukubona imali.
Manje, la mapulatifomu amasha awagcini nje ngokuhlanganiswa okukhiqizwayo, anemikhankaso ekulungele ukwethulwa ngokushesha uma usuyinike amandla. I-Omnisend ngenye yalezi zinkundla - enemikhankaso yeziteshi eziningi elungele ukusebenza:
Uchungechunge lokwamukela - Yamukela ababhalisile bakho abasha bese uwaguqula abe abathengi ngamasethi enziwe ngomumo wama-imeyili anobungani.
Ukulahlwa Komkhiqizo - Finyelela kubathengi ababuke imikhiqizo kodwa bashiya isitolo sakho esiku-inthanethi ngaphandle kokuthenga.
Ukulahlwa Kwebhodi - Buyisela izinqola eziningi ezilahliwe ngokusebenzisa uchungechunge olwakhiwe ngaphambilini nge-imeyili ezenzakalelayo nemiyalezo ye-SMS.
Ukuqinisekiswa kwe-oda - Thumela i-SMS yokuqinisekisa i-oda noma i-imeyili enerisidi lokuthenga kumakhasimende akho ngemuva nje kokuthenga.
Isiqinisekiso Sokuthumela - Nikeza amakhasimende akho ukumamatheka ngokubazisa ukuthi i-oda labo lisendleleni.
Thengisa - Shayela ukuthengisa okuningi ngokusikisela imikhiqizo enconywe kakhulu ngokususelwa kuma-oda wangaphambilini amakhasimende akho.
Ipulatifomu ayigcini lapho, I-Omnisend kufaka phakathi konke okudingayo ukuhlanganisa idatha yomuntu wesithathu, ukwenza ngezifiso, ingxenye, imikhankaso yokuhlola, ukwengeza ukuthengisa kwakho, nokubika ngentuthuko yakho:
Imibandela Yokuqukethwe Enemibandela - Faka futhi ubonise amabhulokhi wokuqukethwe we-imeyili ukukhetha izingxenye ezithile zezithameli kuphela.
Ukuhlukaniswa okuzenzakalelayo - Hlela izinhlinzeko zakho ezikhethekile nezikhuthazo zezindlela eziningi zemilayezo ezenziwe ngezifiso ngaphakathi kokuhamba komsebenzi okukodwa.
Ukuhlolwa kwe-A / B Split - Hlola ukubona ukuthi isiphi isiteshi, isisusa, noma umugqa wezihloko okuqhubela ukuguqulwa okuningi - bese wenza izinqumo eziqhutshwa yidatha ukuthuthukisa ukuhamba kwakho komsebenzi.
Ukuhlukaniswa - Hlukanisa amakhasimende akho ngokususelwa ekuziphatheni kwawo kokuthenga nezakhiwo eziningi ukuthuthukisa ukuguqulwa ngama-imeyili aqondiswe kahle, enziwe waba ngowakho, nemibhalo.
Izincomo Zomkhiqizo - Ukuthengiswa okunezincomo ezinamandla zezinto ikhasimende ngalinye elinakho ukuzithenga.
I-SMS yeselula - Faka i-SMS nezinye iziteshi eduze kwama-imeyili wakho usebenzisa ipulatifomu efanayo futhi unikeze umuzwa wamakhasimende ohambisanayo, we-omnichannel.
Amafomu - Okuzivelelayo, ukuphuma kwenhloso, amakhasi okufika, amabhokisi okubhalisa, namafomu we Wheel of Fortune konke kwakhelwe ukuthuthukisa ukutholwa kokubhalisile kwakho.
Izindikimba Ezilungiselelwe - Faka isithombe sakho bese uqala ukuthumba nokuthumela koxhumana nabo khona manjalo!
Imibiko Yomyalezo Eyakhelwe ngaphakathi - Landelela idatha yokuthengisa neyokubandakanya ukwengeza ukuqhutshwa komsebenzi wakho ngaphandle kokushiya isihleli se-Automation.
Imibiko Yokuzenzekelayo - Ngena ngokujulile ekusebenzeni komsebenzi ngamunye ukuqhathanisa iziteshi ezahlukahlukene bese ulandelela amakhasimende aguqukile.
Ukubika Okuthuthukisiwe - Hlaziya imali engenayo kanye nedatha yokuzibandakanya ye-workflows bese ubona imishini ezenzekelayo esebenza kahle kakhulu.
Compliance - Qoqa imininingwane enemininingwane enemininingwane nge-TCPA ne-GDPR amafomu ahambisanayo.
I-Omnisend ikuvumela ukuthi usebenzise kalula idatha yakho yenkampani yangaphandle ukunweba ubukhulu bemiyalezo yakho eyenziwe yaba ngeyakho. Thola ubuciko bokuklama nokwakha kalula usebenzisa imicimbi yangokwezifiso nedatha evela kuzinhlelo zakho zokwethembeka nemivuzo, amadeski osizo, izinhlelo zokubuyekeza, izinsizakalo zokulandelela ukuthunyelwa, nokuningi konke ngenkathi usebenzisa i-Automation Editor efanayo.
Ngokuchofoza okukodwa kokuhlanganiswa kwepulatifomu ye-ecommerce, ukusekelwa okuvelele okungu-24/7, nokuvumelanisa okuphelele kwedatha — ungashintsha futhi uthole ukuzenzekelayo kwakho kokuqala imizuzu engama-30 nje kuphela. Ukuhlanganiswa kwe-Ecommerce kufaka phakathi i-29 Okulandelayo, I-BigCommerce, Magento, Opencart, Prestashop, Thenga & Shopify Plus, Volusion, Futhi WooCommerce.
Cela iDemo noma Qala Isilingo Samahhala se-Omnisend
Ukudalula: Ngisebenzisa izixhumanisi zami ezihambisanayo ze I-Omnisend namapulatifomu e-ecommerce akule ndatshana.
Tags: 29 NgokulandelayoI-BigCommerceukulahlwa kwenqolainqola yokulahla ama-imeyiliinqola yokulahla umbhalo weselulaukulahla inqola smsezokuhweba ngekhompyuthai-imeyili ethengisa ngokuhweba ecommerceezokuhweba ngekhompuyutha ezishintshayoecommerce ukumaketha kwamaselulasms ecommerceMagentoukuzenzekelayo kokuzenzekelayoukuvulaama-imeyili okuqinisekisaPrestaShopi-imeyili yokulahla umkhiqizoama-imeyili okuqinisekisa ukuthumelaThenga futhi uthengise futhiukulahlwa kwenqola yokuthengaukuqhumawamukelekile uchungechunge imeyiliWooCommerce
Khulisa Ukulethwa Kwakho NgePhakheji Lokuqinisekisa Lokuthumela Lamafu Lokumaketha
I-MarketerHire: Lapho Ungaqasha khona Umaki Wokuzimela WeVetted Freelance